Sheekadii Cusbeyd : Libin Jaceyl Qeybtii 22aad | Jowhar Somali News Leader
Sheekadii Cusbeyd : Libin Jaceyl Qeybtii 22aad
Aabe Warsame oo aad u xanaaqsan ayaa soo galay Hooyo Maryan oo weyso qaadaneyso ayuu ku yiri.
Aaway Qadar miyuu yimid
Isaga oo baxay ayaan ogaa maxaa jira Xaaji
Waa wiil waalan kaalay miyuusan nin weyn noqoneynin oo uusan xishooneynin
Xaaji waad I cabsi gelineysaa muxuu sameeyey
Muxuu sameeyey war wiil yar oo muskiin ah ayaa uu garaacay kaalay miyuusan ka fikireynin sumacada uu rerkaan ku leeyahay bulshada dhexdeeda maxay tahay sida uu u dhaqmayo.
Qadar oo warka aabahiis maqlaayey ayaa soo baxay oo yiri
Maxaa tiri wiil miskiin ah in aan nafta gooyo ayaa ay aheyd
Maqal maqal Xaajiya gar ayuu isla leeyahay nacas ayaad tahay dagaalka waa ceeb nin weyn xaalkiisa maaha.
Aabe kuwa aan aqlaaqda laheyn marka ay afka kula soo galaan waa nin cashar loo dhigaa
I maqal ma ogtahay oo mana is ogtahay in wiilka aad si xun u waxyeeleysay haddii uu kugu dhinto ma ku fikirtay I maqal Qadar aniga wadnaheyga ayaa tahay ninkii aan reerkaan wakiil ka noqon lahaa ayaa tahay oo aniga I badali lahaa isku day in aad hab dhaqankaaga wax ka badasho mana doonayo in wixii caawa dhacay in ay mar kale dhacaan waa in aad xanaaqaaga xakameyso.
Sheekadii Cusbeyd : Libin Jaceyl Qeybtii 21aad
Aamus waryaa oo maqal hadalka aabaha dagaalka waa ceeb waana wax laga xishooda kaalay dadka marka aad garaaceysid ma awood ayaa u sheeganeysaa xishoo Qadar maxay tahay hab dhaqankaan cusub ee aad la timid.
I maqal haddaba ma doonayo in wixii caawa dhacay ay mar kale dhacaan
Qadar isaga oo madaxiisa hoos jira ayaa uu ku yiri
Haye aabe waa balan in aysan mar kale dhaceynin
Falis iyo Yaasmiin oo goobta taagnaa hadalka oo dhan la socday ayaa markii meesha lagu kale tagay oo cid kasta qolkeeda tageen ayaa ay Falis walaasheed ku tiri.
Qalbigayga ayaa I leh cid aan Yaasiin aheyn ma aysan dagaalamin
Haye ma haatuf ayaa kuu soo aqbaaray
Maya Yaaska waa hubaa qof aan Yaasiin aheyn ma aha
Falis markiiba telefoonkii Yaasiin ayaa ay garaacday misna waa uu dansan yahay cid kale oo ay ka ogaan kartana ma jirin balse waa ay hubtay in caawa uu xaafada soo galayey.
Saalax kaalintii loo dhiibay ayaa uu ka soo baxay oo dhamaan qarashkii farmashiyaha inta uu bixiyey ayaa uu Yaasiin iyo daawadiisa inta uu kaxeeyey ayaa uu xaafadiisa ku soo simay dibna u soo wacay Aabe Warsame oo ugu sheegay in ay wax walba hagaajiyey.
Aabe Warsame kama warhaayo wiilka ay wiilkiisa is laayeen inuu yahay Yaasiinkii gabaradhiisa Falis lagu sheegay in uu xiriir kala dhaxeeyo Qadarna uma sheegin isagana ma fahamsana xaaladaasna waxaad moodaa in maskaxdiisa ay waa hore ka baxday.
Yaasiin xaafadiisa ayaa la geeyey inuu dagaal soo galay oo kaliya ayaa uu reerkiisa u sheegay balse waxa uu sheekada oo dhan kaga dhacay saaxiibkiis Nuuradiin oo laf ahaantiisa kaga digay inuusan xaafadaas ku laaban waliba isaga oo keli ah.
Falis oo weli ku jirta welwelka ay ka qabto cida uu Qadar la dagaalay inuu yahay Yaasiin waxaase murugta u sii kordhiyey telkiisa oo weli densan maxaa yeelay goobtii uu dagaalka ku galay ayaa uu kaga yimid balse waxaa gacanta ku haayey Saalax oo markii uu ka soo laabtay Yaasiin loo dhiibay isuna sheegay inuu beri uu u geeyo.
Qadar oo weli ka xishoonayo aabahiis ayaa subaxii ku dhici waayey inuu ag fadhiisto oo uu la quraacdo waxa uuna hooyadiis u sheegay in uu Dekada ku socda uusan waqti u heli Karin inuu quraac u sii fadhiisto Qadar markiiba waxa uu soo maray saaxiibkiis Saalax oo uu damacsanaa inuu ka wareysto sida ay wax u gaareen Yaasiin banaanka guriga ayuu kula kulmay waxa uu ku yiri.
Haye waxaan is lahaa wuu jiifaa waxaan filayaa in aad meel ku socoto
Haa ninkii Yaasiin ahaa telefoonkiisa halkaan kaga dhacay oo aan rabaa in aan u geeyo
Oo maxaa kaa galay maad hore u sii tuurtid
Taasi waad og tahay in aysan iga suuroobin waana in aan u geeyaa waana gardarneyd xalay maxaadse ku maagtay wiilka.
Aragiisa ayaaba I dhiba balse maxaad ka rabtaa isaga ayaanba imaan doonin xaafada mar kale.
Haye waan sii baxayaa
Kaalay ii dhiib telka
Maxaad ka rabtaa ma in aad burburisaa rabtaa
War mayee ii dhiib
Oo maxaad ka eegeysaa number sired ayaa ugu xeran
Haye lafta ka soo saar
Maxaad u socotaa aniga kuma fahmin iska daa telkaan.
Fiiri Sim Card ka soo saar
Qadar inta uu telefoonk ka dafay ayaa uu kala furay markiiba ka soo saaray Kaarka kadib uu telefoonkiisa geliyey adeega shirkada Hormuud ee numberka telefoonka lagu ogaado ayaa uu siticmaalay markiiba waxa uu helay numberkiisa waxa uuna ku xafiday telefoonkiisa Saalax isaga oo yaaban ayaa loo dhiibay oo lagu yiri.
Haye maxaad la yaaban tahay ma anigaa wax kaa qaatay waa kaa telefoonka iyo kaarkiisa ee nabadey.
Hadaan ku gartay waxaad dooneysaa in aad garaacdo telefoonkiisa oo aad ku dhibco badsato waan kaa yaaban nahay ee iska ilaaw dagaalka waad ogtahay aabaha inuu neceb yahay.
Nabadey igu salaam nacaska.
Previous article Meydadka 13 Soomaali ah oo laga helay tuulo ku taal dalka Mozambique
Next articleTarzan; “Xildhibaanada Baarlamaanka waxa ay cabsi gelin ku hayaan Madaxweynaha iyo Ra’iisul Wasaaraha.”